Home Wararka Shuruudaha wadahadal dhex mara Somalia iyo Somaliland (Faallo)
W/Q. Ibrahim Hassan Gagale
Aragtida qoraalkan waxa ay ku gaar tahay qofka ku saxiixan, kamana tarjumeyso tan Muqdisho Online. MOL, waa mareeg u furan qof kasta inuu ku gudbiyo ra’yigiisa saliimka ah. Kusoo dir qoraaladaada [email protected] Mahadsanid
Sidee u aragtaa fekerkaan?
Previous articleRW Kheyre oo magacaabay guddiga qabanqaabada dib u heshiisiinta Galmudug
Next articleSuldaan Cabdullaahi oo xalay lagu dilay magaalada Gaalkacyo
Yey Dani ugu jirtaa Khilaafkan Cusub ee Galmudug iyo Kan Soo karsamaya ee Hirshabeelle? Akhriso
Fanaan Cabdi Dhaanto oo balan qaaday in Fanaan Shabaab ah uu Tiyaatarka isku Qarxin doono
NISA oo so bandhigtay Fanaan Shabaab ah.
Yey Dani ugu jirtaa Khilaafkan Cusub ee Galmudug iyo Kan Soo karsamaya ee Hirshabeelle?...
Wararka Axmed Geelle - January 21, 2020
Iyadoo mar waliba la ogaa inuu Maxamed Nuur Gacal yahay fitna ka taliye ayaa haddana waxaa soo baxaya inuu jiro barnaamij ay isla qaateen...
Fanaan Cabdi Dhaanto oo balan qaaday in Fanaan Shabaab ah uu Tiyaatarka isku...
News Axmed Nageeye - January 21, 2020
Iyada oo 24saac ka hor Hay,adaha AMaanka Magaalada Muqdisho ay Gacanta ku dhigeen Fanaan Abshir Gaarane Axmed oo ka mid ah Fanaaniinta Gobolka Banaadir...
Wararka Sharmarke Xuseen - January 21, 2020
Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa caawa barteeda Twtter-ka ku baahisay muuqaal kooban oo muujinaya fanaanka Abshir Gaarane Axmed oo...